Somaliland oo Dowladda Federaalka ku eeddeysay faragelin | KEYDMEDIA ENGLISH
Maamulka gooni isku-taagga ku dhawaaqay ee Somaliland ayaa dowladda fedraalka Soomaaliya ku eeddeyey, inuu faragelin ku hayo arrimaha madax-bannaanida maamulkaas.
HARGEYSA, Soomaaliya - Maamulka Somaliland ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay fara gallin baahsan ku heyso arrimaha siyaasadeed ee maamulkaas, waxaana ay tilmaameen in dowladda dhexe ay dooneyso in ay dhaawacdo qorshaha ay madax-bannaanida ku raadinayaan.
Haddalkan waxaa kulan ay yeesheen gollaha wasiiradda maamulkaas, ka sheegay hoggaanka Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kaas oo xusay in aan loo dulqaadan karin, fara-gallinta Somaliland uga imaneysa Soomaaliya.
Biixi wuxuu dowladda Soomaaliya uga digay in ay sii wado fara-galinta uu sheegay in lagu hayo, qadiyada gooni isu-taaga Somaliland, isagoo cod dheer ku sheegay in Somaliland ay u madax-bannaan tahay arrimaheeda siyaasadeed ee gaarka ah.
kulanka uu Biixi ka qeyb galay ee gollaha wasiiradda Somaliland, ayaa sidoo kale lagu taageeray, doodii ay barlamanka UK ka yeesheen, arrimaha la xiriira qadiyada madax-bannaanida Somaliland.
Hadalka Muuse Biixi ayaa ku soo aaddaya, xilli wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya, qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, uu ku weeraray Gavin Williamson, oo ahaa xildhibaankii barlamanka UK geeyey, doodii ku wajahaneyd madax-bannaanida Somaliland, wuxuuna wasiirku dowladda ingiriiska ugu baaqay in ay fara-gallinta ka deyso arrimaha gaarka ah ee ka dhaxeeya Soomaalida.
Barlamanka Ingiriiska, ayaa talaadadii aynu ka soo gudubnay, dood kooban ka yeeshay, qadiyada madax-bannaanida Somaliland, inkastoo ay natiijo la'aan ku soo dhamaatay, balse waa tallaabo muujineysa inuu hod dheer ku dhacay aqoonsiga ay mudada 30-ka sano raadinayaan Biixi iyo maamulkiisa.